Mon, Jul 13, 2020 at 7:36am
मुटु स्वस्थ राख्न खानुहोस् यस्ता खानेकुरा
बुधबार, आषाढ ११, २०७६ साल
एजेन्सी, ११ काठमाडौँ शारीरिक अवस्थाअनुसार आहार सन्तुलित हुनुपर्छ । कार्बोहाइड्रेड, चिल्लो, प्रोटिन, भिटामिन र लवणहरू आवश्यकताअनुसार खानाबाट प्राप्त गर्नुपर्छ । मुटु स्वस्थ राख्न यस्ता परिकारमा ध्यान दिनुपर्छ । घ्यू, तेल तथा अन्य चिल्लोको मात्रा जति सक्यो कम प्रयोग गर्नुपर्छ । खाना पकाउन शुद्ध तोरीको तेल नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । दैनिक तीनदेखि पाँच ग्रामभन्दा बढी नुन प्रयोग गर्नु हुँदैन । नुन थपेर..
​यस्ता छन् सरकारद्धारा पारित २५ स्वास्थ्य नीति
काठमाडौं, ११ असार । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ पारित भएको छ । उक्त नीतिमा आयुर्वेदको विकास गरी स्वास्थ्य पर्यटन भित्र्याउने, स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने, देशभित्र र बाहिरका सबै नेपालीलाई समेट्ने लगायतका २५ नीति रहेका छन् । स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले आज मात्र मन्त्रालयमा नीति पारित भएको जानकारी आएको बताइन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत चैत महिनामा नीति मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। उनले भनिन्,..
स्वास्थ्य बिमामा सकस, बिमितमाथि गम्भीर खेलबाड
काठमाडौँ, ११ असार । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकीय अभाव, गुणस्तरीय उपकरण, पर्याप्त जनशक्ति तथा औषधि अपर्याप्ततालगायतका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । बिमित बिरामीहरूले औषधिमा छुट पाउन सकेका छैनन् भने कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा औषधिसमेत छैन । यस्तै, स्थानीय तहमा पनि चिकित्सकीय सेवा नहुँदा बिरामीहरू सेवा प्रदायक भनेर नतोकिएका..
घरमा प्रसूति शून्य गराउँदै वाणगङ्गा नगरपालिका
मंगलवार, आषाढ १०, २०७६ साल
जीतपुर, १० असार कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिकाको पाँचौँ नगरसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । समृद्ध वाणगङ्गाको मूल आधार कृषि ,पर्यटन, वातावरण पूर्वाधार रोजगारलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै आज वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नगरसभामा आव २०७६÷७७ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरउपप्रमुख चक्रपाणि अर्यालले नगरपालिकाको वृहत्तर पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासका लागि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको एकीकृत शहरी विकास..
वायुमण्डलमा तातो हावा, बढ्दो तापमान : ख्याल गर्नैपर्ने केही कुरा
काठमाडौँ, १० असार तपाईंले अनुभव गर्नुभएकै होला, घाम निकै चर्किएको छ । वायुमण्डलमा तातो हावा चलिरहेको छ । शहरी क्षेत्र, जहाँ भिडभाड छ, त्यहाँ खपिनसक्नु गर्मी छ । मान्छेको बढी चहलपहल हुने ठाउँ, सार्वजनिक यातायात, विद्यालयको कक्षाकोठा अरु बढी बाफिएको अनुभव हुन्छ । बन्द कोठामा ताजा हावा वहकिएको छैन । एकातिर घामको राप, अर्कोतिर जमिनको । त्यसमाथि तातो हावा । उकुसमुकुस छ..
मौसम परिवर्तनसँगै बिरामीको सङ्ख्या बढ्यो, वृद्धवृद्धा र बालबालिका बढी प्रभावित
बैतडी, १० असार । गर्मीयाममा जिल्लामा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । जिल्ला अस्पतालमा हाल दैनिक ८० देखि १०० सम्म बिरामी आउने गरेका छन् । अहिले प्रायः ज्वरोका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका उक्त अस्पतालका चिकित्सक जगदिशचन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभयो । गर्मीयाम शुरु भएसँगै बिरामीको चाप बढेको उहाँको भनाइ थियो । बिरामीमध्ये वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको सङ्ख्या बढी छ । मौसम परिवर्तनको समयमा..
कुष्ठरोग नियन्त्रणमा नयाँ अभियान : सम्पर्कमा रहनेलाई पनि औषधि
बाँके, १० असार । कुष्ठरोग नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ अभियान अघि सारेको छ । देशका विभिन्न जिल्लामा नमूनाका रूपमा कार्यान्वयनमा आएको उक्त अभियान यस वर्षदेखि बाँके र बर्दियामा पनि सञ्चालन भएको छ । कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि सरकारले वर्षौँदेखि ठूलो रकम खर्चिँदै आए पनि सङ्क्रमितको दर निरन्तर उस्तै देखिएपछि नयाँ अभियान थालिएको अभियानमा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दामियन फाउण्डेशनका नेपाल..
दुधसँग भुलेर पनि नखानुहोस यी ८ चिजहरु
सोमबार, आषाढ ९, २०७६ साल
एजेन्सी, ९ असार दुध हाम्रो स्वास्थको लागि धेरै नै फाइदा जनक पौष्टिक तत्व हो । तर, दुधसँग केही खाने कुराहरु खाँदा हामीलाई हानिकारक शरिरलाई हानी समेत गर्नसक्छ । आयुर्वेद विज्ञानले त्यसलाई ‘विरुद्ध आहार’ नियम मानेको छ । यसका अनुसार केही खानासँग दुधखाँदा अपच हुने, तौल बढ्ने, छालाको एलर्जी हुने लगाएतका धेरै समस्याहरु देखा पर्न सक्छन् । दुधसँग यस्ता भोजन नखानुहोस् १. रहरको दाल रहरको दाल..
काठमाडौँ, ९ असार सरकारले विदेशस्थित विभिन्न अस्पतालमा अचेत अवस्था (कोमा) मा रहेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउने तयारी थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा बसेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय बैठकले कोमामा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश ल्याएर उपचार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । श्रम मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य, अर्थ, परराष्ट्र, कानून..
१ महिनामै दुब्लाउन चाहनुहुन्छ भने छोड्नुहोस् यस्ता ७ बानी
आईतवार, आषाढ ८, २०७६ साल
काठमाडौँ, ८ असार आजकाल धेरैजसो मानिसहरु आफ्नो बढिरहेको तौलका कारण चिन्तित छन् । यी मानिसहरु तौल घटाउनका लागि निकै कोशिस पनि गर्छन् तर उनीहरुको कोशिसले रंग ल्याउँदैन । यदि यो सूचीमा तपाईं पनि समावेश हुनुहुन्छ भने एकपटक आफ्नो दैनिक तालिकामाथि निगरानी गर्नुहोस् । कतै तपाईंको बढिरहेको तौल तपाईंको बानीका कारण नै भएको त होइन । भारतीय सिनियर कन्सल्टेन्ट डा. दिप गोयलबताले त्यस्ता सात..
राजधानीका बाटो वरपर सरसफाई राख्न निःशुल्क डस्टविन वितरण
काठमाडौं, ८ असार । काठमाण्डौ उपत्यकाका जथाभावी फोहर सरसफाई गर्ने उदेश्यले भोला, करेन्ट पान मसाला र रोट्रयाक्स क्लब अफ रुद्रमतीको सयुंक्त आयोजनामा कैयौं डस्टविन वितरण गरिएको छ । उपत्यकालाई लक्षित गरि भोला, करेन्ट पान मसाला र रोट्रयाक्स क्लब अफ रुद्रमतीको सँयुक्त आयोजनामा सर–सफाइ अभियान सुरु भएको हो । डस्टविन वितरण कार्यक्रम वातावरण सफा स्वच्छ राख्नको लागी प्लास्टीक आदिलाई नकुहिने बस्तुहरु डस्टविनमा हालेर ब्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले संचालन गरिएको..
२ हप्तादेखि डोल्पा अस्पतालमा औषधि अभाव, उपचारमा चुनौती
जाजरकोट, ८ असार दुई हप्तादेखि टाइफाइड र ज्वरोको बिरामीको सङ्ख्या बढेपनि डोल्पा अस्पतालमा औषधि नहुँदा समस्या भएको छ । टाइफाइड जाँच गर्नका लागि आवश्यक पर्ने किट ( हुइडल पेष्ट रियाजेन्ट) नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । पाँच दिनदेखि यो औषधि अभाव हुँदा अस्पतालमा आएका बिरामीको उपचारमा चुनौती थपिएको डा सिजन रावलले बताउनुभयो । मौसम परिवर्तनसँगै डोल्पामा बिरामी बढे पनि टाइफाइड पत्ता लगाउने..
सुत्केरीको रक्तस्राव रोक्ने औषधि नै म्याद सकिएका
काठमाडौँ, ८ असार । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानले मातहतका स्वास्थ्य चौकीमा म्याद गुज्रिएको औषधि पठाएको छ । नौबहिनी गाउँपालिका–८ स्थित फोप्ली स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरीको रक्तस्राव रोक्न प्रयोग हुने अक्सिटोसिन इन्जेक्सन म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा आइपुगेको स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख विनोद शाहले बताए । ‘३० एमपुल इन्जेक्सनको म्याद नाघेको थियो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य कार्यालयबाट आएका औषधि गाउँपालिकामा एक महिना स्टोर भएछ ।’ गाउँपालिकाले समयमै..
बिहान खाली पेटमा चिया पिउनुहुन्छ ? शरीरमा पुर्‍याउछ यस्ता १० असर
शनिबार, आषाढ ७, २०७६ साल
एजेन्सी, ७ असार धेरै नेपालीको दैनिकी चियाबाट सुरु हुन्छ । चिया नेपाली संस्कृति नै बनिसकेको छ । चिया तयार नपार्ने घर सायदै हुन्छ । कतिपयलाई त कैयौँ कप चिया पिउँदासमेत धित मर्दैन । जुन स्वस्थकर छैन । खाली पेट चिया पिउनाले त शरीरमा गम्भीर असरसमेत पुर्‍याउन सक्छ । बिहान धेरै बेरसम्म खाली पेट बस्दा शरिरमा एसिडको मात्रा बढ्ने गर्दछ । चियामा पनि एसिड..
“२ दिनको बसाइले आयुर्वेद र योगबारे भोक जगाइदियो, यो त निरन्तर चाहिने रहेछ”
काठमाडौँ, ७ असार । “दुई दिनको बसाइले आयुर्वेद र योगबारे एक प्रकारको भोक जगाइदियो । यो त निरन्तर चाहिने रहेछ ।” कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्रमा तनाव व्यवस्थापनको कक्षा लिइरहेका नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकास्थित भवानी माविका प्रधानाध्यापक शङ्करप्रसाद लोहनीले भन्नुभयो, “यस्तो कार्यक्रम हाम्रा विद्यार्थीलाई पनि बेलाबेलामा दिएमा उनीहरु र शिक्षकको आपसी सञ्चार र बुझाई अझ परिष्कृत हुन सक्नेछ ।” लोहनीसहित ककनी..
रेसम चौधरीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, नेलले बाँधेर उपचार गरेपछि बाबुरामको आपत्ति
काठमाडौँ, ७ असार । टीकापुर काण्डका मुख्य योजनाकारको अभियोगमा जन्मकैद भोगिरहेका सांसद् रेसम चौधरीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि उनको वीर अस्पताल उपचार भईरहेको छ । उपचारका क्रममा नेल र हत्कडीले बाँधेर राखिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले यो घटना कति ‘मानवोचित र विधिसम्मत’ हो भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् । निलम्बित सांसद रहेका चौधरीलाई..
सामाजिक विकासमन्त्रीद्वारा अञ्चल अस्पतालको अनुगमन
शुक्रबार, आषाढ ६, २०७६ साल
गलकोट, ६ असार गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले आज धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको अनुगमन गर्नुभएको छ । मन्त्री पुनले मन्त्रालयले अञ्चल अस्पताललाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्न बागलुङ आउनुभएको हो । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको धौलागिरी अञ्चल अस्पताल सुधारका लागि प्रदेश सरकारले सदैव चासो दिएको भन्दै बजेट सही ढङ्गले प्रयोग भए नभएको अनुगमन..
मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक लिची
काठमाडौँ, ६ असार राजधानीसहित देशका अधिकांस स्थानमा गर्मी बढ्दो छ । यो समयमा बजारमा विभिन्न प्रकारका फलफूल पाइन्छ । यो समय लिचीको पनि मौसम हो । लिची स्वास्थ्यवर्धक हुनुका साथै यसमा प्रसस्तै पोष्टिक गुण पाइन्छ । लिचीमा कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन सी र बि कम्प्लेक्ससँगै पोटासियम, क्याल्सियम जस्ता खनिज पदार्थ पाइन्छ । लिची खाँदा अनुहारमा निखार आउँछ भने चाउरिपन पनि हट्छ । लिचीमा पाइने क्याल्सियम,..
जटिल समस्या सिर्जना भएभएपछि हेलिकप्टरबाट सुत्केरी महिलाको उद्धार
बाजुरा, ६ असार । हेलिकप्टरमार्फत एक सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ । जिल्लाको स्वामिकात्तिक गाउँपालिका–१ मुक्तिकोटकी २२ वर्षीया रजनी विकलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा सुत्केरी हुन नसकेपछि नेपालगञ्ज पठाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो । विकको सुत्केरी हुन एक महीना बाँकी रहेको भए पनी उनलाई अहिले नै जटिल समस्या सिर्जना भएका कारण भेरी अञ्चल अस्पतालमा उपचारका लागि..
किन आउँछ बारम्बार अमिलो डकार ? यस्तो छ कारण
बिहिवार, आषाढ ५, २०७६ साल
काठमाडौँ, ५ असार खाना खाएपछि मानिसहरुलाई अक्सर डकार आउने गर्दछ । डकार लिनाले पेटमा जम्मा भएको हावा बाहिर निस्कने गर्दछ । यस्तो डकार सामान्य हुदाँसम्म हामीलाई खासै समस्या हुँदैन । तर जब पेटबाट अमिलो डकार निस्किएमा भने धेरैलाई तनाव हुने गर्छ । आखिर किन आउँछ अमिलो डकार ? अमिलो डकार विभिन्न कारणले आउने गर्छ । जसमध्यको एक खानालाई पनि मानिन्छ । विशेषगरी..
सधैँ भीड लाग्ने भक्तपुर अस्पतालका आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प
भक्तपुर, ४ असार । वीर अस्पतालपछि दोस्रो जेठो सरकारी अस्पतालका रूपमा रहेको भक्तपुर अस्पतालमा कर्मचारी आन्दोलनका कारण आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएको छ । अस्पतालको सबै सेवा ठप्प पार्दै हातमा कालो पट्टी बाँधेर ३५ कर्मचारीहरु अस्पतालको प्राङ्गणमा धर्ना दिएर बसेका छन् । सधैँ भीड लाग्ने अस्पताल आन्दोलनका कारण बिरामी नआएपछि सुनसान भएको छ । अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट (मेसु) डा. सुधा देवकोटाले..
गर्मी बढेसँगै आकस्मिक बाहेकका बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने रगत अभाव
चितवन, ४ असार । जिल्लामा गर्मी बढेसँगै रगतको अभाव देखिएको छ । क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरका अनुसार अहिले केन्द्रमा आकस्मिक बाहेकका बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने रगत अभाव भएको हो । केन्द्रका प्रमुख रमेशकान्त पौडेलले जिल्लामा दैनिक १५० युनिट रगतको आवश्यक पर्ने जानकारी दिनुभयो । तर अहिले केन्द्रमा ७० देखि ७५ युनिट मात्रै रगत रहेको छ । गर्मी बढेसँगै रगतको आवश्यकता हुने बिरामीको..
मिर्गौला स्वस्थ बनाउन पानी सही समय र मात्रामा पिउनुहोस्
काठमाडौं, ३ जेठ आयुर्वेदमा पानी पिउने सही समय र मात्राको उल्लेख पाइन्छ । सही समय र मात्रामा पानी पिउँदा त्यसले औषधिको काम गर्छ । तर गलत तरिकाले, गलत समयमा र गलत मात्रामा पानी पिउँदा नोक्सानी पु–याउँछ । आयुर्वेद विशेषज्ञ डा अबरार मुल्तानीले कहिले र कति पानी पिउँदा कुन रोगबाट बच्न सकिन्छ भनी बताएका छन् । दुई गिलास पानी बिहान उठ्नेबित्तिकै पिउनुस् । यसो..
घोराही, ३ असार घोराही उपमहानगरपालिकाले सिकलसेल एनिमिया रोगको प्रारम्भिक जाँच गर्ने भएको छ । यही असार ११, १५ र १६ गते घोराहीका तीन स्थानमा सो रोगको प्रारम्भिक जाँच गर्ने उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखाले जानकारी दिएको हो । उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६\_७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त रोगका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम ल्याएकामा सोहीअनुरुप आफ्नो क्षेत्रभित्र सिकलसेलका बिरामीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि निःशुल्क..
बिहे गर्ने उमेर अगावै गर्भपतन गराउने किशोरीहरुको सङ्ख्या बढदै
स्याङ्जा, ३ असार जिल्लामा बिहे गर्ने उमेर अगावै गर्भपतन गराउने किशोरीहरुको सङ्ख्या बढदै गएको छ । नेपालको कानूनमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । तर बिहे गर्ने उमेर अगावै गर्भपतन गराउने किशोरीहरुको सङ्ख्या यहाँ बढ्दै गएको पाइन्छ । गर्भपतन गराउनेमा विवाहित मात्रै नभएर अविवाहित पनि आउने गरेको ग्रौघ्याङ्लिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी सिनियर अनमी रेनुका शर्माले बताउनुभयो । महीनामा ४० देखि ६०..
यसरी साम्य भयो ओम अस्पताल प्रकरण
सोमबार, आषाढ २, २०७६ साल
काठमाडौं, २ असार उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु भएपछि ओम अस्पतालमा सुरू भएको तनाव लेनदेनमा टुंगिएको छ । अस्पतालले मृतकप्रति समवेदना प्रकट गर्दै तिर्न बाँकी रकम मानवीय हिसावले मिनाहा गर्ने सहमति भएको वक्तव्य जारी गरेको छ । आफन्त मृतकको संस्कार गरेर फर्किएका छन् । के थियो घटना ? सिन्धुपालचोककी रामप्यारी थापाको २४ जेठमा पित्तथैली अपरेशन भएको थियो । भोलिपल्ट अचानक स्वास्थ्यमा समस्या देखियो । अस्पतालले..
अस्थायी साधनको रूपमा प्रयोग हुँदै गर्भपतन सेवा
डोटी, २ असार जिल्लामा निःशुल्क सञ्चालनमा रहेको सुरक्षित गर्भपतन सेवा पछिल्लो समय अस्थायी साधनका रूपमा प्रयोग हुन थालेको पाइएको छ । आइपास नेपाल र सामुदायिक विकास मञ्च (सिडिएफ) डोटीको संयुक्त सहयोगमा नेपाल सरकारले जिल्लाका १८ स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतमा यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गरे रु एक हजार तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि पछिल्लो समय यहाँका १८..
पूर्वी तराईमा डेंगु नियन्त्रणमा चुनौती, बिरामीको संख्या बढ्दै, के हो डेंगु ?
काठमाडौँ, २ असार । पूर्वी तराईका जिल्लामा देखा परेको डेंगु नियन्त्रण हुन नसक्दा फैलिएर बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ । डेंगु फैलिँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका स्वास्थ्य निकायलाई चुनौती थपिएको छ । ती निकायबीचमा समन्वय नहुँदा पछिल्लो समय डेंगु फैलिनेक्रम जारी रहेको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका वडा नं १५ का एक बिरामीको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गत..
च्याउ खाएर बिरामी परेकाको स्वास्थ्य उपचार सेवा सरकारले बेहोर्ने
रामपुर, २ असार । पाल्पाको निस्दी गाउँपलिकामा च्याउ खाएकाहरुको उपचारमा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ । गत जेठ २४ गते निस्दी ३ सार्कीडाँडाका चार परिवारका ११ बिरामीमध्ये ६ जनाको ज्यान गएको छ भने दुई जना उपचारपछि घर फर्केका छन् । स्थानीयवासी ८० वर्षीय प्रेमसिं ठकुरी र दानकुमारीसिं ठकुरीलाई उपचारपछि घर फिर्ता गराइएको सङ्घीय सांसद दलबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौंँका विभिन्न अस्पतालमा..
स्वास्थ्य सेवाप्रति नै उब्जियो प्रश्न ! सिंहदरबारभित्रको हेल्थ डेस्कमै औषधि अभाव
काठमाडौं, २ असार । सिंहदरबारभित्रको हेल्थ डेस्कमा अत्यावश्यक औषधि अभाव भएको छ । कम्तीमा ४० प्रकारका अत्यावश्यक औषधि हुनुपर्नेमा त्यहाँ पाँच प्रकारका औषधि मात्रै रहेको सिंहदरबार हेल्थ डेस्कका सिअहेव दीपक मुडभरीले बताए । देशको प्रशासनिक केन्द्रको एउटा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्न आवश्यक औषधि आपूर्तिका लागि राज्यका निकायबीच समन्वय नहुँदा सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था देखिएको छ । सिंहदरबारभित्रका करिब सात हजार कर्मचारीको..
Results 1452: You are at page 24 of 49
First Prev 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next Last